အာဂ မြန် မာ့ XDA DEVELOPER တွေ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » အာဂ မြန် မာ့ XDA DEVELOPER တွေ (၁)
အာဂ မြန် မာ့ XDA DEVELOPER တွေ (၁)
Posted by nigimi77 on Jul 10, 2012 in Gossip, Rumor | 19 comments
APK ေတြ ရမယ္ Firmware ေတြ ရမယ္ Unlocker ေတြ ရမယ္ (ဒန္အိုးဒန္ခြက္ ၀ယ္ေရာင္း ကုလား ေလသံၿဖင့္ ဖတ္ပါ )
APK တွေ ရမယ်…….APK တွေ……..။
ပီကေတော့ မဟုတ်ပါဘူး ….. Android application package file (APK) လို့ခေါ်တဲ့ ဟာတွေပါ ။
ပေါလိုက်တဲ့ APK တွေ ဆိုတာ မိမိရဲ့Android စနစ်သုံး Handset ကနေ Mobile Market Application တခုခုကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ်
Google Search မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် APK ဆိုတာနဲ ့ကို များပြားလှတဲ့ APK တွေကို တွေ ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ပြောရမယ် ဆိုရင်ဖြင့် 99% လောက်ဟာ Free Application တွေပါ ။ တော်တော်ကို ကောင်းမွန်နက်နဲ တဲ့ App တွေ လောက်သာ
တစ် ဒေါ်လှမျိုး နှစ် ဒေါ်မျိုးနဲ့ရောင်းတာတွေရှိတယ် ။ ဆိုတော့……မိတ်ဆွေမှာ Android စနစ်သုံး Handset တလုံးရှိမယ် ၊
Wifi Access လုပ်လို ့ရနိုင်မယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ် 13000 ပေးပြီး ဆက်သွယ်ရေး မှာ Mobile Internet (EDGE) ကို လျှောက်ထားမယ်
ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အလကားမတ်တင်း ရနိုင်တဲ့ APK တွေဟာ Install လုပ်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် 32G SD Card နဲ ့လည်း မလောက်နိုင်ပါဘူး ။
SIM CARD တွေကလည်း ၂သိန်း ၂သိန်းခွဲလောက် ဖြစ်လာ ၊ (EDGE) ကလည်း သုံးလို ့ရလာ ဆိုတော့ Smart Phone တွေ သုံးရတဲ့
အရသာက ပိုမို ပီပြင်လာပါတယ် ။ Handset တွေကလည်း အမျိုးမျိုး App တွေကလည်း အမျိုးမျိုးနဲ့….လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာ
Smart Phone ကိုယ်စီနဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာ ပရုတ်ဆီပွတ် သလိုမျိုးနဲ့အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်း သမီးတို့ပွတ်သဘင် ကျင်းပချိန်ပါပဲ ။
ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်းနဲ့ပိုသိလာ ၊ ပိုသိလာတော့ ပိုကလိလာ ၊ ပိုကလိလာတော့ ဟို ဗားရှင်းလေး မြှင့်ချင် ဒီဗားရှင်းလေး အမြစ်တူးချင် နဲ ့ပေါ့ ။
အမြစ်တူးတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ Root လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ Smart Phone တလုံးကို ဆိုင်က ဝယ်ဝယ်လာချင်းမှာ
ပထမဆုံး လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်က မြန်မာလိုဖတ် မြန်မာလိုရေးချင်ကြတာ User အားလုံးရဲ ့တူညီတဲ့ ဆန္ဒ ပဲပေါ့ ။
ဒီတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ….. ။ မွှေနှောက်လေ့လာ ဖတ်ရှု စမ်းသပ်နေတဲ့ သူတွေကတော့ တော်ရုံ Version လောက်ကတော့
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အင်တာနက်ကနေ အလကားရတဲ့ Root Application တွေ Unlocker တွေ Unlock Bootloader တွေသုံးပြီး
အမြစ်တူးပြီး သကာလ အလကားရတဲ့ zawgyi20071230.ttf ကို သွင်းပြီး မြန်မာ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ ဖတ် ၊ မြန်မာလို ချတ် ပြီး နှပ်နေလို့ရပေမဲ့
နိဂိမိလို နလပိန်းတုံး Android Phone ဆိုတာကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း လောက်မှာ Huawei က ထုတ်တဲ့ C8500 Series (For CDMA 800) ကို ပုလဲ ကွန်ဒိုမှာ
ရှိတဲ့ Elite ကနေ ဝယ်ခဲ့တယ် ။ မြန်မာစာ သုံးချင်တော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အသင့် Download လုပ်ထားတဲ့ Zawgyi Font ကို Handset ထဲကို ခပ်တည်တည်နဲ ့
သွင်းပါလေရော ။ ဘယ်လိုသွင်းသွင်း ဘယ်လိုလုပ်လုပ် မြန်မာဖောင့်က မရပါဘူး ။ အဲဒါနဲ ့ပဲ Elite ကို နောက်တနေ ့နံနက်မှာ ချီတက်သွားပြီး
ကျွန်တော်မျိုး မြန်မာစာ သုံးချင်ကြောင်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောပြတော့ အဲဒီက အလှ နတ်သမီးလေး တစ်ယောက်က မြန်မာလို သုံးချင်ရင်
လုပ်ပေးလို ့ရတယ် ဖုန်းကို ထားခဲ့ရမယ် ၊ တရက်ကြာမယ် ၊ ငွေ တစ်သောင်းခွဲ ကျမယ် ဆိုလို့ထားခဲ့ပါတယ် ။ နောက်တနေ ့မနက်မှာတော့
နိဂိမိ ဖုန်းဟာ မြန်မာစာ နဲ ့ရိုက်ပြီး မြန်မာလို ချတ်လို ့ရသွားပါပြီ ။ ဒါကတော့ နိဂိမိ ရဲ့Android ဘဝ အစပေါ့ ။
နောက်တော့ တတ်သွားမှာပါ။အမြစ်တူးတာလဲ အခက်သားလားဗျာ။
အန်းဒရိုက် တက်ဘလက်လေးတစ်လုံးလောက် ဝယ်ပွတ်မလို.ဂျို.။
အကျံညန်လေး မစဂျဗာအုံး……။အမြစ်တူးတာ အဲ့လောက်တောင် ကုန်လား……။
ပန်းသီးမှာ ထောင်ဖောက်ရင်ကော ဘယ်လောက် ကုံသဒဲ့ဒုံး…သိချင်မိပါအိ……။
၈ဝတန်ကနေ ၁၀၀ဝတန်လောက်ထိ ….အစုံရှိ. …စက်ရုပ်ပြောပါတယ်…
ဘတ်ထ် ယူဝယ်လ်နဲဗား အုမ်န်း အန် အိုင် အိုအက်စ်..
ကျနော့ ဟန်းဆက်က အင်တာနက် သုံးမရဘူး
လိုင်းတော့ ဖွင့်ထားပြီ ဟန်းဆက်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတာ စခရင် သေးသေးလေးမှာလည်း မှုန်ဝါးဝါး မပွတ်ချင်ဘူး.. ပိုက်ပိုက်လည်း အများကြီး အကုန် မခံနိုင်ဘူး..
သူများတွေ တပ်ဗလတ် ဆိုတော့လည်း လိုက် တပ်ဗလတ် ချင်ပြန်ရော
တပ်ဗလတ်ကို ဆင်းမ်ကဒ် ထည့်လို့ရတဲ့ တပ်ဗလတ်ပဲ ဗျင်းလိုက်ရမလား စဉ်းစားတယ်
ပန်းသီးတခြမ်းတို့ ဆမ်တစောင်းတို့ကလည်း ဈေးကြီးတာ ၄ ခုအောက်မဆင်းဘူး…
ဖင်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်း သောက်ချင်သလိုဖြစ်လို့
ဟင်း.. အဆင်ပြေတာလေးတော့ ရှိရမယ်..
မရှိလည်း စောင့်လက်စနဲ့ အချိန်ထပ်စောင့်မယ်..ဟီ
ကျုပ် ဟန်းဆက်တော့ မနေ.ကကားပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရလို.ပါသာွးသဗျို.
ကဒ်ပြန်လျှောက်တော့ လဂျီးမင်းဆိုင်မှာ စောင့်ရက် ၁ဝရက် ကျသင့်ငွေ ၄၀၀၀၀
APK ဆွဲတတ်..လုပ်တတ်တဲ့သူရှိရင်.. အလုပ်အပ်ချင်သား…
အော်ပီကျယ် ကတော့ APK လို့ ဆိုင်းထိုးပြီး ကောင်းကောင်း ဆွဲတတ်တယ်။
သူ့ ကို အပ်ကြည့်ပါလား။
ရှိတယ် ကိုခိုင် ရေ ။
အဲဒီကို သွားကြည့် ။
Root လို့မရသေးတဲ့ Model တွေ အတွက်ကို မြန်မာ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကို မြန်မာဖောင့်
မသွင်းပဲ မြန်မာလို ဖတ်လို ့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာ ။ ကျုပ်လည်း အမြစ်တူးလို ့
မရခင် အချိန်က မန်းဂေဇာတ်ကို ဒါနဲ့အားပေးခဲ့ရတယ် ။
ဒါနဲ့ကိုရင်နိဂိမိ ပျောက်နေတာကြာပေါ့ရခိုင်မှာအလုပ်များနေတယ်ထင်ပါ ့။
ဒါကတော့ နိဂိမိ ရဲ့Android ဘဝ အစပေါ့ ။
ဒါကအစဆိုတော့အဆုံးရှိဦးမယ်ထင်ပါ့။ ဗဟုသုတအလို့ငှာ စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်။
ကိုရွာစားကျော်ရေ ဆင်းကတ်ထည့်လို့ရတဲ့တက်ဗလက်က တရုပ်ကဘလိုင်းဝင်တဲ့ဟာတွေပဲထင်တယ်။ ခုနစ်သောင်းခွဲလို့တော့ကြားတယ်။စကရင်က ခုနစ်လက်မ အင်တာနက်သုံးလို့တော့ကောင်းတယ် စာလုံးတွေရှင်းနေတာပဲ၊ သူများဟာငှားပွတ်ဖူးတယ်။ကျနော်လည်းခွေးတော့မွေးထားပြီးပြီ။ခြံမရှိသေးဘူးဗျ။ အဲသလိုမျိုးတက်ဗလက် ဘရန်းဒက် တွေ တွေ့ရင် သံချောင်းလေးခေါက်လိုက်ပါဗျို့။
110 တဲ့ခည …
ဟောဒါဂျီးသာ အကောင်းဆုံး …
နီရဲ နေတာပဲ ။
ဖေတရာတွေ ဆေးခတ်သွားတယ် ။
ဩ …မိပြီ မိပြီ ……. ဟိုလူဂျီး …… လက်စသတ်တော့ ဒင်းက … တသောင်းကျော် အကုန်ခပြီးမြန်မာစာ သွင်းထားလို့ ကျုပ်ကို …. မနာလို တိုရှည်ဖြစ်အောင် မြန်မာစာတွေ ရိုက်ပြနေတယ်ပေါ့လေ …. ။
အခုဆို ဖရီးရတဲ့ဆိုဒ်တွေ ဒီကနေဖွင့်ရတာ သိသိသာသာကြီးကို အတော်လေးနေပြီ …. ။ လိုချင်လို့ အကုန်ဒေါင်းလော့ လုပ်ရင်း လုပ်ရင်း … မန်မိုရီကဒ်လည်း ခဏခဏပြည့်တယ် …. မလိုတာတွေ ဖျက်ရင်း ဖျက်ရင်းကလည်း ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး .. … ။ ဒါတောင် စပေ့သိပ်မကျန်တော့ဘူး … ။
ှဆိုင်မှာ မြန်မာစာသွင်းလျှင် သုံးထောင် နဲ့ငါးထောင်ပေးရတယ် .. ဒါကြောင့် ဘော်ဒါတွေနဲ့ ချိတ်ပြီး ကလိတာ .. မြန်မာစာက ကီးပတ်မှာပဲ ပေါ်ပြီး …. အန်းတားခေါက်ရင် လေးထောင့်လေးတွေ ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ် …. ။ ပိုက်ဆံ မပေးချင်တာထက် ..ဖုန်းဆိုင်မရောက်ဖြစ်တာရယ် ၊ စိတ်မရှည်သေးတာရယ်ကြောင် ….. ကလိရင်းနဲ့ … မြန်မာစာ သုံးမရသေးဘူး … ။
နောက်တစ်ခုမကျေနပ်တာက …ကိုယ်တွေ အင်တာနက်ဖွင့်တုန်းက … တရားဝင် သုံးသောင်းပေးရပြီး ၊ ဆားဗစ်ကြေးဆိုပြီး တစ်သောင်း စုစုပေါင်း လေးသောင်းကုန်ခဲ့တာပဲ … ခွိးးးးးးးးးးးးးး တင်းတယ်ဟေ့
တချို့သော APK ဖိုင်တွေမှာ .. ဝိုင်ဖိုင် ဟက်တို … ဝိုင်ဖိုင်ခရက်ရှ်တို့ပါတယ် … သိလား … ဒါပေမယ့်လည်း …. သုံးမရဘူး .. အသုံးမတည့်ဘူး … အဲ့ဒါမျိုးဆို မဒေါင်းဖို့ … ကြို အသိပေးလိုက်ပါတယ် … ။
ညည်းဟာက ဘယ်ရမလဲ ။ အမြစ်မှ မတူးရသေးတာ ။
အမြစ် မတူးရသေးရင် Zawgyi Keypad ထည့်ထားလည်းပဲ
မြန်မာစာရိုက်လို့မရဘူး ။
Handset အမျိုးအစားနဲ့Model Number ကို ပြောပြရင်တော့
အွန်လိုင်းကနေ Firmware ရေးတတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး Developer
ဆရာကြီး လေသံနဲ့ကျုပ်က ညည်းရဲ့ဖုန်းကို အမြစ်တူးဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ် ။